निकै भावुक र संवेदनशील हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, सानो-सानो कुरामा पनि दुखाउँछन् मन अनि झारी हल्छ्न आसु!!! « गोर्खाली खबर डटकम
निकै भावुक र संवेदनशील हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, सानो-सानो कुरामा पनि दुखाउँछन् मन अनि झारी हल्छ्न आसु!!!
हामी राम्ररी जान्दछौँ कि केटीहरू स्वभावै नम्र छन्। साना चीजहरूमा आँसु बगाइहाल्छन्। तर आज हामी केहि राशि चिन्हहरूको बारेमा बताउन जाँदैछौं कि त्यस्ता केटीहरू जुन रुने क्रममा अग्रणी छन्।
तिनीहरू धेरै सजिलै चित्त दुखाउँछन्। र यसको बारेमा धेरै सोच्दछन्। तर तिनीहरू अरूलाई आफ्नो भावनाको बारेमा बताउँदैनन् गुप्तमा रोइरहने हुन्छन् ।
यस्ता व्यक्तिहरु जो रुनमा हुन्छन् निकै अगाडि
कर्कट राशि भएका मानिसहरू सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिको मनमा सजिलै चोट पुग्दछ र कुनै पनि क्षणमा रुन्छन्। यी व्यक्ति सजिलै कमजोर हुन सक्छन् र अरूलाई पनि यस बारे बताउन सक्दैनन्।
मीन राशि भएका व्यक्तिको मनमा धेरै सजिलै चोट पुग्न सक्दछ। जब तिनीहरू रोइरहेको अवस्थामा हुन्छन् तिनीहरू सजिलै रुन्छन्।कसैले केही सम्झाएको खण्डमा झन् बढी रुन थाल्छन्।
वृश्चिक राशिका मानिसहरु पनि रूँदै अगाडि बढ्छन्। जब उनीहरूको मुटुमा चोट पुग्छ, तिनीहरू पक्कै रुन्छन्। तर यी दयालु, वफादार र जोसिलो व्यक्तिहरू हुन्छन्।
यो पनिपढ़नु होस:विश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनी माइक्रोसफ्टका मालिक तथा विश्वकै धनि व्यक्ति मध्येका एक हुन् बिल गेट्स । उनको ब्यापारको बारेमा त हामीले थुपै खबरहरु सुन्दै आइरहेका छौं । तर, आज हामी उनको निजी जीवनको बारेमा चर्चा गर्दैछौं ।मेलिन्डा गेट्स बिल गेट्सकी पत्नी हुन् । उनीहरुले बिहे गरेको पनि २५ वर्ष भइसकेको छ । यि दम्पत्ती विगत २५ वर्षदेखि हरेक राति भाँडा माझ्दै आइरहेका छन् ।
आतंकवादको प्रयोजक पाकिस्तान